विवाह नङ - दुलही लागि मैनीक्योर
फैशन रुझान र रुझान को बोल्ने, तपाईं एउटा कुरा नोटिस गर्नेछन्: विवाह नङ एक बाध्यकारी फैशन छैन। निस्सन्देह, हरेक वर्ष, पनि हरेक नयाँ विवाह एक दुलही मैनीक्योर को डिजाइन मा नयाँ विचार र, मूल विवरण खडा। तर, अर्कोतर्फ, यस्तो धातु मोती र spikes वा friable वार्निश रूपमा बोल्ड र उत्तेजक रुझान Chase छैन। रंग को विकल्प मा सुरिलो हुन विवाह मैनीक्योर।
नियम नम्बर एक: - veils, आभूषण र - मेकअप विवाह नङ शैली, पहिरन र सामान को शैली संग संयुक्त गर्नुपर्छ। को पोशाक पर्याप्त ruffles, बेल र पत्थर छ, विशेष गरी यदि, मैनीक्योर "अधिभार" छैन - यो एकदम गाह्रो छ। तपाईं के चयन गर्छन् - एक क्लासिक ज्याकेट? त्यो के धेरै दुल्हन छ। तर त्यहाँ अन्य धेरै रोचक विकल्प छन्।
आकार र विवाह नङ को डिजाइन
कसरी सजाया गरिनेछ विवाह नङ सन्दर्भमा मास्टर संग परामर्श गर्न, आभूषण राम्रो ल्याउन र स्पष्ट देखाउन, पोशाक को तस्वीर उसलाई देखाउनुपर्छ - शायद सानो घर मा छन् नङ लागि सजावट नै शैलीमा। केश सहमत हुनुहुन्छ। राम्रो, यदि र स्टाइल, र रहनसहन दुलही को मैनीक्योर जस्तै सानो घर मा प्रदर्शन गर्नेछन्।
को लागि रूपमा नङ को आकार, सामान्यतया दुलही विस्तारको लामो इन्कार र राम्रो-groomed नङ छोटो चयन - यो आन्दोलन र विवाह पोशाक लगाएका अधिकतम सुविधा को सजिलो सोच्न महत्त्वपूर्ण छ। साथै, दुलही हातमा लेन्सको को केन्द्र मा स्थायी रूपमा छन्। मालिकको मैनीक्योर यस्तो प्रकारका प्रस्तावित:
हाम्रो हजुरआमा को समय आए एक क्लासिक - अलिकति गोलो नङ लम्बी।
आयताकार वा स्पाटुला - सेवा ज्याकेट अन्तर्गत ठूलो हेर्न।
बादाम आकारको - एक रोचक डिजाइन, सायद पनि उपरि विवरण आवश्यक छ।
डिजाइन विवाह नङ को कसरी घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ? म ज्याकेट कुरा सुरु भएकोले यसलाई आफ्नो मूल विविधता, रूपमा उल्लेख बारेमा सोच लायक छ "प्रशंसक-ज्याकेट।" कुनै Jokes, को आकृति सुझाव फैलएको जस्तै - यो पोशाक को एक टुक्रा संग उज्यालो रंग, अनुरूप। यो दुलहा नै रंग को buttonhole संग संयुक्त उज्ज्वल क्रिमसन आकृति, हुन सक्छ।
अब तपाईंको नङ सुशील विवाह धातु नङ पालिस रंग वा ठूलो sequin उपस्थिति बाहिर बनाउन। यो दुलही को औंला चम्किनु घन्टी emphasizing, अर्को आभूषण को दृश्य प्रभाव सिर्जना गर्दछ। यो एक औंठी आकारको ढाँचा सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ सुन पन्नी र हीरा को रूप मा एउटा सानो rhinestone।
धेरै सैलून यसको डिजाइन विवाह नङ मा मात्रा प्रस्ताव - यो चित्र स्पष्ट देखाउनुहुन्छ। Volumetric विवरण लामो वा सबै भन्दा राम्रो हेर्न को विस्तार नङ। यो एक कुशल हुन सक्छ , एक्रिलिक सजावट एक पोशाक वा बेल सिलाई लागि भागहरु दोहर्याउँदै - अब मैनीक्योर मा फैशन प्रवृत्ति छ। Alas, यस्तो डिजाइन लामो पछिल्लो छैन, त्यसैले यो पूर्व चित्रकला को दिन को तुरुन्त लागू गर्न आवश्यक छ।
अन्तमा, इंप्रेशनिस्ट मालिकको प्रेमीहरूलाई लागि जलजीवालय चित्रकला प्रविधी प्रस्ताव। सजिलो प्रक्रिया: पहिलो नङ वृद्धि गर्दै जेल वा एक्रिलिक शीर्ष मास्टर acrylics पाउडर प्रयोग गरेर चमक, rhinestones रूपमा multilayer ढाँचा राख्छ। शीर्ष छवि टुकडे टुकडे छ र पलिश - यो पारदर्शी नङ जस्तै ठाउँमा भोल्युम प्रभाव गर्दछ। लागत, यस्तो प्रक्रिया धेरै महँगो हुनेछ।
जो डिजाइन आफ्नो मैनीक्योर लागि चयन गर्न - प्रत्येक अलग निर्णय गर्छ। मुख्य नियम - रंग आदर्श दुलही गरेको छाला गर्न अनुकूल हुनुपर्छ, हात राम्ररी groomed र तनावमुक्त क्रीम हुनुपर्छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - नङ खुसी मनपर्ने खोज्नुपर्छ।
मैनीक्योर मखमल। घरमा मखमली मैनीक्योर कसरी बनाउने?
रातो ज्याकेट, नङ डिजाइन: फोटो स्टाइलिश मैनीक्योर
कला चित्रकला नङ र यसको भेरिएसनहरूमा
घरमा रंग संक्रमण संग आश्चर्यजनक मैनीक्योर
टायर Pirelli सूत्र बरफ: कार मालिक को समीक्षा
Sabrina: नाम मान, व्यक्तित्व यसको प्रभाव
को hydrocolloid लाउने के गर्छ?
अर्डर बेच्न मा पानी aerate गर्न: व्यापार को विचार!
लागि दोस्रो बीस मिनेट के खाना पकाउनु